Fari-dranomasin’Antalaha: tratra ilay sambo Flying mpanondrana andramena | NewsMada
Fari-dranomasin’Antalaha: tratra ilay sambo Flying mpanondrana andramena
Ilay sambo panameanina, ny Min Feng, efa tratra nanondrana andramena, ny taona 2015, ihany ny sambo Flying, tratra tany Antalaha, omaly. Fantatra izany nandritra ny fihaonan’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny mpiara-miasa aminy, omaly.
Tratra, omaly tamin’ny 9 ora sy sasany maraina, tany amin’ny manodidina an’Antalaha, ilay sambo Flying. Teratany sinoa sy ganeanina ny tao anatiny ary sambo panameanina izy ity. Raha ny loharanom-baovao azon’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny ekolojia ary ny ala (MEEF), ilay sambo Min Feng, efa nanondrana andramena, ny taona 2015, ihany ity novaina ho Flying ity. Nandray anjara tamin’ny nahatrarana azy ny tompon’andraikitra samihafa, ny Dreef Sava sy Analanjirofo, ny mpitandro filaminana, ny OMC, ny VOI any an-toerana, ny mpitantana ny seranan-tsambo APMF.
Ao anaty fotoam-pifidianana
Niantsona tany amin’ny fidirana ny helodran’Antongil i Flying (Min Feng), ny talata 18 desambra teo tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro. Nihetsika ny mpitandro filaminana malagasy, ary naharitra ora roa ny fifanenjehana. Nampiasaina ny sambo mpiandry morontsiraka Noa sy ny helikoptera. Nanapoaka basy ny mpitandro filaminana ary tratra ihany ilay sambo.
Efa saika hiditra taty Madagasikara koa ity sambo ity tamin’ny andron’ny fifidianana fihodinana voalohany, ny 7 novambra teo. “Tafatsoaka tany amin’ny fari-dranomasina maorisianina ity sambo ity tany am-boalohany”, hoy ny sekretera jeneralin’ny MEEF, Ramiandrarivo Hariniaina.
Efa tamin’ny volana jona
Raha ny loharanom-baovao avy any amin’iny tapany avaratra atsinanan’ny Nosy iny, efa tamin’ny volana jona 2018 teo no nahenoana fa hiverina ny fanondranana antsokosoko andramena amin’ity fifidianana ho filoham-pirenena ity hatramin’izao faran’ny taona izao. “Tsy nino izany ny rehetra nefa izao iaraha-mahita izao”, hoy ihany izy.
Maro koa ny zavatra mifamahofaho amin’ity raharaha ity. Antony, misy ny ahiahy fa sao misy paikady hafa hataon’ireo mpanao trafika ka mety ho voasarika any Toamasina ny sain’ny rehetra. Manaitra ny rehetra hanara-maso hatrany any amin’iny tapany avaratra atsinanan’ny Nosy iny ny mponina any an-toerana satria tsy mbola milamina ny raharaha.